» कमला ह्यारिसको उम्मेदवारी– अमेरिकी इतिहासमा शक्तिशाली कदम !
कमला ह्यारिसको उम्मेदवारी– अमेरिकी इतिहासमा शक्तिशाली कदम !
९ भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:०२
भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक, राजनीतिज्ञ, सामुदायिक अधिवक्तालगायत सबैले यतिखेर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको उमेदवारका रुपमा कमला ह्यारिस प्रमुख पार्टी डेमोक्रेटबाट छनोट भएकोप्रति अधिक खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । उपराष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि कमलालाई चुन्नु अमेरिकी सम्भाव्यतातर्फको हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली कदम भएको उनीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिका उमदेवार जो बाइडेनले सिनेटर कमलाको नाम लिनासाथै निल मखिजाका बुाले उनलाई घरबाट एउटा तस्बिर पठाए जसमा कमला आफ्नो परिवारसँग भारतको सांस्कृतिक पहिरनमा बसिरहेकी थिइन् । मखिजा ‘इम्प्याक्ट’ नामक भारतीय अमेरिकी राजनीतिक संगठनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सो तस्बिर उनको परिवारकै एल्बमबाट लिइएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । यसरी पहिलोपटक देशको शर्षि पदका उम्मेदवार आफू जस्तै रुपरेखाको भएकामा अत्यन्तै खुसी महसुस गरेको उनले भावुक हुँदै बताए ।
उनी भन्छन्, “भारतीय भएकाले हामीलाई छिमेक वरपरका कसैले पनि बुझ्दैन थिए र मेरी आमाको फरक बोली सुनिसकेपछि समाजमा हामीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै छाडियो । यस प्रकारका अनुभवहरु कमलाले राम्ररी बुझ्न सक्छिन् । मेरो विचारमा हामी पहिलोपटक समाजमा राम्ररी देखा परेका छौँ । अहिले मात्र सबैको नजर हामीमाथि आएको छ ।” अघिल्लोसाता बाइडेनले कमलाको नाम घोषणा गरिसकेपछि उनी अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो एसियाली मूलकी अश्वेत अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति उमेदवार बन्न सफल भएकी हुन् । यसकारण पनि अधिकांश एसियन–अमेरिकनहरुका लागि यो क्षणको उल्लासमय बन्न पुगेको छ ।
कमला जसरी नै अमेरिकी सदनमा सम्मिलिन पहिलो भारतीय अमेरिकी महिला, डेमोक्रेटकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपालले पनि बाइडेनले कमलालाई छनोट गरेको खबर पाएपछि आफ्नी आमाले ब्याङलोरदेखि लामो टेक्स्ट म्यासेज लेखेर पठाएको बताइन् । उनी भन्छिन्, “यो खबरले वास्तवमै धेरैलाई व्यक्तिगत खुसी दिएको छ र यो खुसी अमेरिकामा मात्र सीमित छैन । उनले पार गरेको ठूलो बाधा देखेर अरुलाई पनि यो देशमा धेरै कुरा सम्भव रहेकामा हौसला मिलेको छ । ” भारतीय अमेरिकीहरु, राजनीतिक नेता र सामुदायिक अधिवक्ताहरुसँग यस सम्बन्धी लिइएको अन्तर्वार्तामा सबैले कमलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासीविरुद्ध प्रस्तुत गरिने दमन प्रवृत्तिलाई खण्डन गरेको बताएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनमा जनअधिकार विभागकी प्रमुख रहिसकेकी भनिता गुप्ता भन्छिन्, “वास्तवमा विपक्षी जोसुकै भए पनि कमला यो स्थानसम्म आइपुग्नु आफैँमा एक अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो । तर पछिल्ला केही वर्ष विशेषगरी जातिय विभेदको प्रयोग गरि राजनीतिक लाभका निम्ति पूरै देश विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको हुँदा अहिलेको प्रशानका कारण देशवासीहरुले दुर्भाग्यवश् धेरै पीडा सहनु परेको अवस्था थियो जुन अब अन्त्य हुने आशा गर्न सकिनेछ ।”
केही भारतीय अमेरिकीहरुले त अहिलेसम्म कुनै एसियन अमेरिकीले गर्न नसकेको काम कमलाले गरेर देखाउँदा यसले अमेरिका आउने आफ्नो परिवारको निर्णयलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको बताएका छन् । न्युयोर्कस्थित पूर्व सरकारी वकिल प्रित बहराले भनेका छन्, “यसले के पुष्टि गर्यो भने लक्ष्य जतिसुकै कठिन भएपनि त्यसको पक्षमा निर्णय गरि जित हासिल गर्न सकिन्छ । ” साथै उनले ट्वीट गर्दै आफ्नी आमा यसपटक कमलालाई भोट दिन अत्यन्तै उत्साहित रहेको पनि बताएका हुन् ।
कमलाले आफ्नो आत्मकथामा कसरी उनी आमा र भारतीय हजुरबुवाआमाको फरक पृष्ठभूमीबाट प्रभावित हुनुपरेको थियो भन्ने विस्तृतमा लखेकी छन् । दक्षिण भारतमा हुर्केबढेकी उनकी आमाले डक्टोरल डिग्री हासिल गर्नका लागि अमेरिका आउने निर्णय गर्नु त्यो समयमा धेरै बहादुरीपूर्ण कदम भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । उनका हजुरबुवा भने भारतको स्वतन्त्रताको लडाईँमा सहभागी थिए । आफ्नो चुनाव प्रचार अभियानमा कमलाले यिनै कथाहरु धेरैपटक दोहोर्याएकी छन् । यसले धेरै दक्षिण एसियालीहरुलाई उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी जानकार बनाएको छ जुन चुनावका लागि लाभदायक हुने बताइन्छ ।
तर अझै पनि धेरै मानिसहरुले कमलालाई पूर्णरुपमा श्वेत मान्न मिल्दैन वा उनी पर्याप्त भारतीय पृष्ठभूमिको होइन भन्ने आरोप लगाउन सक्ने एएपीआई भिक्ट्री फन्डका संस्थापक शेखर नरासिंह बताउँछन् । उनको सो समूह एसियन अमेरिकन मतदाताहरुलाई सशक्तीकरण गर्नमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । उनले थप भनेका छन्, “ती सबै आलोचनाका बावजुद कमलाले सबै जातीय समूहलाई एकैठाउँ ल्याउन सक्छिन् जसले पनि उनलाई असली अमेरिकी बनाउँदछ ।” विज्ञ र सामुदायिक नेताहरुले पनि ह्यारिस बहुजातीय भएको तथ्यमा प्रकाश पारिरहेका छन् । र, इतिहास हेर्दा पनि श्वेत नागरिकहरुको नेतृत्वमा जनअधिकार सम्बन्धी १९६० मा भएको आन्दोलनपछि नै अमेरिकामा भारतीय अमेरिकीहरुको जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा राजनीतिक विज्ञानका प्रोफेसर कार्तिक रामाक्रिस्ननका अनुसार हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा भारतीय अमेरिकीहरुले एकदमै ठूलो अन्तरमा ह्यारिसको समर्थन गरिरहेको देखाएको छ । अन्य विज्ञहरुले पनि ह्यारिसको उपस्थिति चुनाव नतिजामा बाइडेनका लागि अधिक महत्वपूर्ण रहने बताइरहेका छन् ।
जयपाल भन्छिन्, “मैले मेरी आमाबाट हो या कसैको मुखबाट यस्तो पनि सुनेँ कि, सायद अब चाहिँ उनीहरुले तिम्रो नाम पनि उच्चारण गर्न सिक्नेछन् । ” द न्युयोर्क टाइम्स